Soo -saarayaasha Taarikada CCO Gasho | Shiinaha CCO Gasho Warshadda Plate & Alaab -qeybiyeyaasha
Tianjin Wodon Xidho Waxyaabaha iska caabin Co., Ltd.
WD1000/1100 Xidho Saxanka
WD1200/1500 Xidho Saxanka
WD1600 Xidho Saxanka
WD1800 Xidho Saxanka
WD2000 Xidho Saxanka
WD-NC100 Xidho Saxanka
Xiro Siligga Hardfacing Plate
Roller Dayactirka Wire Hardfacing
Gaas gaashaaman Hardfacing Wire
Been abuurka & Codsiga
WD1600 Xidho Taarikada
Xidho Silig Alxanka
Rullalulaha Dayactirka Hardfacing ...
Saxanka carbide chromium ee caadiga ah, oo ku habboon in loo isticmaalo codsiyada duugga guud ee ku lug leh saamaynta hoose ilaa dhexdhexaad.
Cabbirka xaashida: 1400*3400mm, 1500*3000mm, kuwa kale marka la codsado
WD1200/WD1500 taxane Abrasion Resistant Chromium Carbide Overlay WD1200/WD1500 waa chromium carbide isku -darka isku -darka isku -dhafan oo ku xidhan saxan gadaal oo bir ah. Debaajiga waxaa lagu xaqiijiyey alxanka arc hoostiisa. Saxanka xirashada WD1200/WD1500 wuxuu ku habboon yahay codsi ku lug leh nabaad -guur daran iyo saamayn hoose ilaa dhexdhexaad. Series WD1200/WD1500 taxane: Taarikada duuban ee kaarboon sare leh ee chromium oo ay soo saarto alxanka quusay; Ku habboon codsiyada ku lug leh nabaad -guur aad u daran oo hooseeya ilaa med ...
WD1600 taxane Abrasion Resistant Chromium Carbide Overlay WD1600 waa chromium carbide carbide cladding fusion oo ku xiran saxan gadaal oo bir ah oo khafiif ah. Debaajiga waxaa lagu xaqiijiyey alxanka arc hoostiisa. Saxanka xidhashada WD1600 wuxuu ku habboon yahay codsi ku lug leh nabaad -guur sare iyo saamayn dhexdhexaad ilaa heer sare ah. Series Taxanaha WD1600: Taarikada duugga u adkaysta ee saamaynta leh; Ku habboon codsiyada ku lug leh abrasion sare iyo saamayn dhexe ilaa sare. Kiimikooyinka Sheet engegnaanta Cabbirka Base Birta C ̵ ...
WD1800 Xidho Taarikada
Taxanaha WD1800 Abrasion Resistant Chromium Carbide Overlay WD1800 waa isku -darka isku -dhafan ee isku -dhafan ee carbide -ka oo ku xiran saxan gadaal bir ah oo fudud. Saxanka xirashada WD1800 wuxuu ku habboon yahay codsiga ku lug leh abrasion sare heerkulka sare ilaa 900 ℃. Series Taxanaha WD1800: Taargooyinka xirmooyinka carbide ee adag; Ku habboon codsiyada ku lug leh abrasion sare heerkulka sare ilaa 900 digrii. Kiimikooyinka Xajmiga Xajmiga Kiimikada Saldhigga Birta C - Cr - Nb - Mo - Ni ...
WD2000 Xidho Taarikada
Taargooyinka xirashada carbide -ka ee adag, tani waa inay u hoggaansanto qeexidda saxanka xirashada BHP 3.
Series WD1000/WD1100 taxane: Dillaacyada aan lahayn taargooyinka dahaarka leh; Badeecad u gaar ah Shiinaha ayaa loogu talagalay inay u shaqayso sidii saqafyada guryaha, iyo taarikada dhagaxa ee mishiinnada birta. Kiimikooyinka Cabbirka Xajmiga Kiimikada Saldhigga Betal C - Cr HRC50-55 - Fiiro Gaar ah oo Bir ah: Kaarboon iyo Chromium -ku waxay ku kala duwan yihiin saxan kala duwan.